Umwisi-mthetho waseRussia ufuna ukunciphisa ikhomishini yeeVenkile zeApple ukuya kuma-20% | IPhone iindaba
Kwiinyanga ezidlulileyo, iApple ibibandakanyeka kwinani elikhulu leempikiswano ezinxulumene nekhomishini ye-30% eseleyo Yonke imicimbi eyenziweyo kwiVenkile ye App. Ityala lika-Epic ngeFortnite liphembelele amalangatye kwaye lazisa abantu abaninzi ngakumbi.
Njengoko kuchaziwe Reuters, I-Apple ijongene nengxaki entsha enxulumene neVenkile yeApple, ngeli xesha hayi nomphuhlisi othile kodwa ngokuchasene nomthetho waseburhulumenteni waseRussia, owomthetho ufuna ukunciphisa ikhomishini yeVenkile yeVenkile kwilizwe ukuya kwi-20%, Ukunciphisa ngesinye kwisithathu.
Umwisi-mthetho uFedot Tumusov wazise umthetho oyilwayo kwindlu esezantsi yepalamente yase-Russia emisela oko ukuthengiswa kwezicelo kuzo zombini iVenkile yeVenkile kunye neVenkile yokudlala kuncitshisiwe kwaba ngama-20%. Kodwa ukongeza, baya kunyanzelwa ukuba bahlawule isinye kwisithathu seekhomishini zabo kwingxowa-mali yoqeqesho olukhethekileyo lweengcali kubuchwephesha bolwazi
Njengokuba oko kwakungonelanga, lo mthetho uyilwayo uza kunyanzela abanini beenkqubo zokusebenza kweeselfowuni ukuba vumela abasebenzisi ukuba bafake ezinye iivenkile (into esele inokwenzeka kwi-Android), ke iya kuba yingxaki enkulu kwiApple, kuba kuphela komthombo osemthethweni wokufaka usetyenziso kuso nasiphi na isixhobo se-iOS.
Okwangoku asazi ukuba i-European Union icwangcisa nini qalisa uphando kwizikhalazo ezahlukileyo ezithi iinkampani ezinje ngeSpotify, iTelegram okanye iRakuten ziveze i-Apple isithi iyodwa.
Ukuphela kukaSeptemba ityala le-Epic ngokuchasene neApple liya kubanjwa lityala lokuba inokuba sisiqalo sesiphelo ayisiyiyo kuphela i-30% yekhomishini efunyanwa ngu-Apple, kodwa ikwedwa kwiVenkile yeApple kwizixhobo ezilawulwa yi-iOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » Umwisi-mthetho wase-Russia ufuna ukunciphisa iKhomishini yeVenkile yeApple ukuya kwi-20%
I-Indiya ikwathintela iPUBG njengoko yenzile ngeTikTok